China Split endriny fibre laser manamarika milina orinasa sy mpamatsy | Haotian
Masinina fanamarihana laser amin'ny fibre na antsoin'ny sasany hoe laser ho an'ny sokitra, ny marika dia manome marika haingana sy marina ny mpampiasa satria mamela ny fanapahana litera amin'ny haben'ny 0.15mm. Ny laser manamarika amin'ny fibre dia ampiasaina amin'ny marika amin'ny fitaovana metaly rehetra.
toy ny: Volamena, volafotsy, vy tsy misy fangarony, varahina, varahina, titanium, Aluminium, seramika, vy, vy sns, ary afaka manamarika ihany koa amin'ny fitaovana tsy metaly maro, toy ny ABS, Nylon, PES, PVC, Makrolon.
Ny laser fibre dia manana loharano maivana avo lenta, miaraka amin'ny kalitaon'ny toerana tsara, ny hakitroky ny hery optique tsy miova, ny herin'ny optika output stable, tsy misy famoahana hazavana, ny taratra avo lenta ary ny toetrany hafa, mahafeno ny filan'ny fangatahana tsena lehibe;
Ny galvanometer fitarafana haingam-pandeha nomerika an'ny marika misy azy dia manana tombony amin'ny habetsaky ny habe, ny hafainganam-pandeha ary ny fitoniana tsara, ary ny zava-bitany dia nahatratra ny ambaratonga avo lenta iraisam-pirenena;
Ny rafitra dia manana asa mahery, afaka manatsara ny fanodinana angon-drakitra isan-karazany arakaraka ny fizotrany samihafa, manohana ny fiteny maro mifamadika fanalahidy, manohana hatramin'ny 256 ny fitantanana ny loko sy ny asa hafa, ary mahafeno ny fepetra takian'ny fampiharana amin'ny ankamaroan'ny indostria eny an-tsena;
Misokatra fisakanana famonosana fanodinana maty famolavolana, lalamby mpitari-dalana namboarina anaty, rafitra milamina ary endrika tsotra.
Masinina fanaovana marika
Karazana maodely HT-20, HT-30, HT -50, HT-60, HT-70, HT-80, HT -100,
Herin'ny famoahana 20W / 30W / 50W / 60W / 70W / 80W / 100W
Ny hatevin'ny fanapahana Mahatratra 0,3 mm / hatramin'ny 0,5 mm / hatramin'ny 1,2 mm / hatramin'ny 1,3 mm
hihena Fangatsiahana rivotra
Karazana loharano laser Laser tamin'ny fibre: RAYCUS / MAX / JPT / IPG
Wavelenght an'ny laser beam 1064 nm
hatetika Raycus 20 ~ 100KHz JPT 10-600khz
Miankina amin'ny lense ny faritra iasana 100 × 100 mm / safidy 50 × 50 mm, 70 × 70 mm, 150 × 150 mm, 200 × 200 mm, 300 × 300mm
Min. sary sokitra 0,15 mm
Fiasa malefaka AC220V 50Hz / AC110V 50Hz
Fifanarahana amin'ny solosaina USB
Fanaraha-maso / Rindrambaiko EzCAD
Support endrika endrika AI, BMP, DST, DWG, DXF, LAS, PLT, JPG, CAD, CDR, DWG, PNG, PCX
Rafitra mandreraka tsy voatery
Ny refin'ny masinina 790 × 480 × 780 mm
Milanja milina 50 kg
Zavatra / ampahany hafa ao anatin'izany Laser mpanondro
Item tsy voatery Fitaovana rotary, rotary manokana ho an'ny peratra, latabatra 2D, mpihazona fitaovana
Tombony amin'ny milina fanamarihana laser
Ny milina fanamarihana laser amin'ny fibre dia manome dingana tsy misy fifandraisana raha tsy misy ny taratra laser miasa ara-batana amin'ny fitaovana itodihana azy. Io dia miantoka fa ny faritra mafana ihany no ho voakasik'izany raha tsy manimba ny faritra manodidina ilay fitaovana. Izy io dia dingana iray tsy manam-paharoa ary ny milina fanamarihana laser dia mamela marika marina sy marina ary avo lenta izay vakin'ireo masinina sy mason'olombelona. Ity milina ity dia malefaka be ary afaka miasa amin'ny fandrefesana kely dia kely. Ireo mpanamboatra milina fanamarihana laser vita amin'ny fibre dia manondrana azy any amin'ny indostria maro erak'izao tontolo izao satria afaka manova mora foana eo anelanelan'ny indostria amin'ny fampiharana marobe izy ireo.
ara-nofo fibre CO2 UV
Vokatra vita amin'ny hazo √ √ √
Akrilika √ √ √
Vokatra plastika √ √ √
Lamba vita amin'ny hoditra √ √
Ceramic Glass √ √
Resin Plastika √ √
Fonosana taratasy √ √
Ireo singa elektronika √ √
Vokatra Hardwaretool √ √
Fitaovana marina √ √
Fitaovana elektrika avo lenta sy ambany √ √
F1: Tsy mahalala na inona na inona momba an'ity milina ity aho, karazana milina inona no tokony hofidiko?
Hanampy anao hisafidy ny milina sahaza izahay ary hizara aminao ny vahaolana; Azonao atao ny mizara anay inona no fitaovana homarihanao marika amin'ny sokitra sy ny halalin'ny fanoratana / sokitra.
F2: Rehefa nahazo ity milina ity aho, fa tsy haiko ny mampiasa azy. Inona no tokony hataoko?
Handefa horonantsary fandidiana sy boky ho an'ny milina izahay. Ny injenieranay dia hanao fiofanana an-tserasera. Raha ilaina dia azonao atao ny mandefa ny mpandraharaha any amin'ny ozinay hiofana.
F3: Raha misy olana mitranga amin'ity masinina ity, inona no tokony hataoko?
Manome fiantohana milina roa taona izahay. Mandritra ny roa taona fiantohana, raha sendra misy olana amin'ny
milina, homena maimaimpoana ireo faritra (ankoatry ny fahasimbana artifisialy). Aorian'ny fiantohana dia mbola manome manontolo izahay
fanompoana mandritra ny androm-piainana. Ka izay fisalasalana rehetra dia ampahafantaro anay fotsiny fa hanome vahaolana izahay.
F4: Inona no azo ampiasaina amin'ny milina fanamarihana laser?
A: Tsy lany io. Tena ara-toekarena ary mahomby.
F5: Ahoana ny vokatry ny fanamarihana tamin'ny laser?
Raha te hahalala ny vokany ianao dia afaka mandefa ny santionany na manoratra aminay, hataonay ny santionany maimaimpoana ho anao ary asehoko anao amin'ny horonantsary ny fomba fampiasana azy.
F6: Inona ny ora fanaterana?
A: Matetika, ny fotoana itarihana dia ao anatin'ny 5 andro fiasana aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola.
F7: Ahoana ny fomba fiasa amin'ny sambo?
A: Araka ny adiresy tena izy dia afaka miantraika amin'ny alàlan'ny ranomasina, amin'ny rivotra, amin'ny kamio na ny lalamby izahay. Azontsika atao ihany koa ny mandefa ny masinina any amin'ny biraonao araka ny takinao.
F8: Inona ny fonosana, hiaro ny vokatra ve izy io?
A: Manana fonosana 3 sosona izahay. Ho an'ny ivelany dia mandray tranga hazo tsy misy fumigation izahay. Eo afovoany, rakotra foam ny masinina, hiarovana ny milina tsy hohozongozona. Ho an'ny sosona anatiny, ny sarimihetsika dia rakotra sarimihetsika plastika tsy tantera-drano.
Teo aloha: Masinina fanapahana laser laser HT-1530 HT-1390
Manaraka: Masinina fanamarihana laser amin'ny endriny vita amin'ny tànana